Home | Dusta News
Ciyaaryahan sarqaawi “waligeey waxaan ahaan doonaa cayaaryahan Galmudug”
Ole Gunnar Solskjaer ayaa hal sano uga hartay qandaraaskiisii ​​hore ee Manchester United laakiin wuxuu haatan heystaa ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka 2023-24. Tababaraha ayaa xilli ciyaareedkii la soo dhaafay kooxdiisa u suuragaliyay in ay horyaalka ku dhameeysato kaalinta labaad ee kala sareynta, halka uu gaaray finaalaha koobka labaad ee Yurub ugu weyb ee Europa League. […]
Isku aadka Quarter-Final ka Europa League oo la xaqiijiyay
Kooxda Inter ayaa xaqiijisay saxiixa weeraryahanka Manchester United Alexis Sanchez
Liverpool oo xalay hanatay koobka horyaalka Ingiriiska 30 sano kadib
Sii Hayaha Wasiiru-Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada XFS Oo Gaarya Magaalada Baydhabo
Naxashyo duugnaa 2,500 oo sano oo haatan dib loo soo saaray
Ilaa 27 naxash ah oo duugnaa in ka badan 2,500 oo sano ayaa waxaa dib usoo saaray khuburro u dhashay Masar. Waxaana naxashyadan lagu arkay goob taariikhii ah oo muqaddas ah ku taalla deegaanka Saqqara oo dhaca koonfurta magaalada caasimadda ah ee Qaahira. Waxaana horraantii bishan la soo saaray 14 kamid ah naxashyadaas halka 14-ka […]
Siihayaha Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa Maanta oo Axad ah kulan gaar ah la qaatay Guddiga Dalladaha Waxbarashada Dalka. Kulanka dhexmaray Wasiir Goodax Barre iyo Guddiga Dalladaha Waxbarashada Dalka ayaa waxaa looga hadlay dib-u-eegista iyo horumarinta waxbarashada iyo in ay ka qeyb-qaataan dadaallada ay Wasaaraddu ku tayeyneyso waxbarashada dalka. Warar la […]
Wasaaradda Waxbarashada oo shaacisay Natiijada Imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka
Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 06-September-2020 waxa ay ku dhawaaqday, Natiijada imtixanadka Shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee sanad dugsiyeedka 2019/2020. Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sanadkaan, ay imtaaxaanaadka dugsiyada sare ee sdalku ay u fariisteen […]
Beesha Ugu deegaanka balaaran Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo ka hortimid ka wareejinta Deegaan doorashada Kuraastooda Baarlamaanka Soomaaliya
Guddoomiyaha Golaha shacabka oo ka hadlay walaaca laga qabo in doorashadu dhib u dhacdo
Muxuu ku saabsanaa kulankii hoggaanka Madasha Xisbiyada iyo James Swan?
Jaamacadda Carabta Oo War Kasoo Saartay Shirkii DFS Iyo Somaliland
Silvia Romano oo la baxday Caa’isha ayaa dareenkeeda ku tusisay Aayado Qur’aan ah dadkii u hanjabay
Emirate Airlines Oo Shuruudo Kusoo Rogtay Rakaabka Dalal Ay Ku Jirto Somalia
Faahfaahino ka soo baxaya gadiid xamuul ah oo lagu gubay Sh/Hoose
Warar aan ka heleyno gobolka Shabeellada Hoose waxay sheegayaan in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay duleedka deegaanka Yaaqbari-weyne ku gubeen laba gaari xamuul ahaa. Labada gaari oo sida la sheegay mid uu dhul siday kuna soo jeeday Muqdisho, midna ku sii jeeday deegaanka Yaaqbari-weyne ayaa waxaa dhex u galay koox la aaminsanyahay inay ka tirsantahay Al-Shabaab, kuwaas […]
Doonyo iyo Maraakiib aad u badan oo maanta ku xayiran dekedda Boosaaso
Wararka aan saakay ka heleyno magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in xeebta Boosaaso ay ku xayiran-yihiin doonyo iyo maraakiib sida shixnado ganacsi. Doonyo iyo maraakiib ku xayiran xeebta Boosaaso ayaa u raran ganacsato Soomaaliyeed.Waxayna ka soo shiraacdeen qaar ka mkd ah dalalka Carabta, gaar ahaan Cummaan iyo Imaraadiga Carabta. Sababta ka dambeysa […]
Abiy Axmed oo soo bandhigay qorshaha ay Itoobiya u sameysaneyso lacag cusub
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu uga hadlay lacag cusub oo Itoobiya ay sameyneyso. Abiy Axmed ayaa sheegay in lagacta cusub looga baaqsan doono howlaha sharci-darrada ah iyo musuq maasuq uu sheegay in hadda uu ka jiro Itoobiya. Naqshadda cusub ee lacagaha ayaa kala ah, 10, 50 iyo 100 […]
Markabka sahanka ah Oruc Reis ee uu Turkigu leeyahay ayaa maalintii shalay aheyd ku laabtay biyaha u dhaw gobolka koonfureed ee Antalya, waana tallaabo dejin karta xiisadaha u dhexeeya Ankara iyo Athens ee ku saabsan kheyraadka dabiiciga ah ee badda. Dalalka Turkey iyo Greece oo labaduba ka tirsan isbaheysiga NATO ayaa ku muransan qalfoof-badeedka iyo […]
Editorial Science & Tech